बुटवल- आम मानिसहरू सर्प देख्नेबित्तिकै मार्ने गर्छन । अझै तराईतिर त विषालु सर्प हुन्छन् । जसको टोकाइबाट मानिसको मृत्यु हुन्छ । त्यस्ता सर्पहरूलाई मानिसहरू जिउँदो छाडदैनन् ।
तर, रूपन्देही एक युवा सर्प संरक्षणमा लागेका छन् । बुटवल–१० रामनगरका ३० वर्षीय कमल देवकोटा विगता दश वर्षदेखि सर्प बचाँउनुपर्छ र यसको माध्यमबाट प्रकृति जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सर्प बचाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा जुटेका हुन । 'प्राणी शास्त्र'मा मास्टर गरेका देवकोटाले सर्पदंशको महामारी विषयमा मास्टरको डिग्रीको थेसिस गरे ।
त्यसपछि उनलाई सन् २०१३ देखि प्रकृतिलाई बचाइराख्न सर्प बचाउनुपर्छ भन्ने मनैदेखि रूचि जाग्यो । उनले प्राणी शास्त्र अध्ययन गरेकाले प्रकृतिका प्राणीले वातावरण सन्तुलन राख्न ठूलो महत्व राखेका हुन्छन् भन्ने बुझे ।
त्यपछि सर्पको बारेमा शोधपत्र तयार गरेपछि त उनलाई सर्प प्रकृतिको लागि अति आवश्यक प्राणी रहेछ, यसको बढदो नासलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सोचाई आयो । त्यसपछि उनले रूपन्देहीकै देवदहमा सर्पसम्बन्धी सर्भे गरेर आम मानिसहरूको सर्पसम्बन्धी धारणा लिए ।
त्यस्तै कार्यक्रम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको गाउँमा पनि सर्वेक्षण गरे । त्यस्तै कार्यक्रम तराईका अन्य जिल्लाहरू सर्लाही, सिन्धुली, कपिलवस्तु, धनुषा, महोत्तरीमा पनि गरे । जहाँ सर्पहरू बढी देखिने र मानिसहरूलाई टोक्ने क्षेत्रहरू पर्थे ।
उनले ती जिल्लाहरूमा धेरै मानिसहरूको धारणा के पाए भने सर्पले तोक्दा मान्छेको ज्यान जाने भएकाले सर्पलाई सकभर मार्नुपर्छ । त्यसको एकाध वर्षपछि उनले 'रफड फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा रुपन्देहीमा सर्प बचाउ अभियान शुरू गरे ।
उनले रूपन्देहीका ३० भन्दा बढी संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा पुगेर सर्पबारे सामान्य (बेसिक) ज्ञान, धारणा र प्रयोग र अनुसन्धान गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न थाले । त्यस्तै प्रकृति बचाउन सर्पलाई बचाउनपर्छ मार्ने होइन भनेर घरभित्र, विद्यालयभित्र र अन्य कार्यालयमा प्रवेश गरेर सर्प समात्ने र जंगलमा लगेर छाड्ने तालिम दिए ।
त्यस्तै देवकोटाले सर्पको आनीबानी कस्तो हुन्छ ? कस्तो ठाउँमा बस्छ ? आफ्नो आहाराका लागि कुन बेला जमिनबाट बाहिर निस्किन्छ ? भन्ने सबै जानकारी गराउँदै धेरै विद्यालय र गाउँहरूमा पनि सचेतना जगाए ।
सन् २०१६ मा नवलपुरको कावासोतीमा 'नेपाल टेक्सिनोलोजी एशोसिएसन' नामको एक संस्था स्थापना गरी उनीसहित एउटा टिमले सर्पको विषको विषयमा थप अध्ययन/अनुसन्धान थाले । 'सेभ द स्नेक', प्रोजेम्ट म्यानेजर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघको सर्पदंश विशेषज्ञ समूहको सदस्य पनि हुन् देवकोटा ।
एशोसिएसनको डक्टर सहितको टीमले सर्पको टोकाइपछि उपचार कसरी गर्ने, सर्प कसरी समान्ते र जंगलमा कसरी लगेर छाड्ने, लगायतका कार्यक्रम गर्न थाल्यो । उनले हालसम्म २ सय भन्दा बढी विषालु र विष नलाग्ने सर्पहरू छोपेर जंगलमा लगेर छाडेका छन् । कही कसैको घरमा सर्प पस्यो भने उनलाई तत्काल फोन आउँछ । उनी भन्छन्, ‘सर्पले मानिसलाई सिधै आएर टोक्दैन । उनले आफू असुरक्षित भएको महशुस गरेपछि मात्र टोक्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘जब मानिस झुक्किएर वा जनाजान सर्पलाई चलाउन खोज्छ तब सर्पले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोज्दै टोक्न पुग्छ । सर्पलाई समात्न खोज्दा, जिस्काउदा वा मार्न खोज्दा प्रायजसो सर्पदंशको घटना हुन पुग्दछ । सर्पले मानिसलाई टोक्छु भनेर कुरेर बस्दैन । सर्पहरू मानिसलाई देख्दा त सकेसम्म भाग्नै खोज्छन् ।’
सर्पले पनि पृथ्वीमा मानिस जत्तिकै महत्व बोकेको हुन्छ । सर्प पनि पारिस्थितिक पद्धतिको एउटा अभिन्न अंग हो । सर्पले स-साना किराफ्टयाङग्रा माछा, भ्यागुता, छेपारो, चरा र स्तनधारी आहार खान्छ ।
चिल, बाज, न्याउरीमुसो, मुसो आदि प्राणीहरूले सर्पको र तिनीहरूको अण्डा आहार गर्छ । सर्पले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण र जीवजन्तुहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ । सर्पले प्राकृतिक तरिकाले नै यी मुसा र किराफ्टयाङग्रा खाइदिएर एकातिर किसानहरुको उत्पादन बढाइरहने र वातावरण जोगाउन पनि सर्पले ठूलो मद्दत गर्ने भएकोले आफू सर्प बचाउन जुटेको देवकोटाले बताए ।
सर्प बचाउन सबै लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सर्प वा सर्पदंशसम्बन्धी कुनै पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा भाग लिई आफ्नो क्षेत्र वरिपरि पाइने विषालु र अविषालु सर्पका बारेमा सबै जानकार रहनुपने उनको भनाइ छ । उनी भान्छन्, 'आफूले जानेबुझेको भ्रम र सत्यतथ्य केलाई आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आफ्ना घर भित्र वा वाहिर वरपर कतै अचानक सर्प देखिएमा त्यसलाई मार्न हुँदैन । बरु तुरुन्त उद्धार गरी केन्द्रमा खबर गरिदिनुपर्छ । बढ्दो सहरीकरण औद्योगिककरण र वन विनाशले अन्य जिवजन्तुहरुका साथै सर्पको पनि बासस्थानमा असर पारी मानिस र सर्पबीच द्धन्द्ध बढन जाने र त्यसले दुवै पक्षलाई हानी गर्ने गर्छ ।'
सर्प बचाऔं, प्रकति जोगाऔ भन्ने अभियानलाई देशव्यापी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको देवकोटा बताउँछन् ।
विश्वमा ३ हजार ५ सय भन्दा बढी प्रजातिका सर्प पाइन्छन् । जसमध्ये ६ सय प्रजातिका सर्प मात्रै विषालु हुन्छन । नेपालमा देवकोटाको टिमले गरेको अध्ययन अनुसार जम्मा ८२ प्रजातिका सर्प छन् । जसमध्ये १८ प्रजातिका सर्पमात्रै विषालु रहेको रेकर्ड छ । नेपालमा १ सय मिटरदेखि ४८ सय मिटरसम्म सर्प पाइन्छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा विषालु मानिएको राजगोमन नेपालमा पनि पाइन्छ । नेपालमा वार्षिक २ हजार मानिसलाई सर्पले टोक्छ । जसमेध्ये १ हजारको मृत्यु हुने विभिन्न तथ्याङले देखाउँछ । सर्पले टोकेको बेलामा समय खेर फाल्नु हुँदैन । सर्पलाई समात्ने वा चलाउने गर्नुहुँदैन । टोकेको ठाउँ काट्ने जलाउने वा चुस्ने गर्नुहँदैन । सर्पले टोकेपछि रक्सी पिउनुहुँदैन । खुर्सानी खानुहुँदैन । कुखुराको मलद्धार लगाउनु हुँदैन । विद्युतीय झडका, पोटासियम परम्याग्नेटको प्रयोग, कुनै पनि आयुर्वेद वा अन्य दवाइहरु गर्न नहुने देवकोटाले बताए ।
अत्यावश्यक र न्यूनतम सुविधा लिएर जनताको सेवामा खट्न मन्त्री पण्डितको आग्रह
विकट गाउँमा निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा
युवा सङ्गम समूहले गर्याे तीजका अवसरमा सरसफाइ